Warshadda Calaamadaha Tooska ah ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Fangda
* Fangda Calaamadaha Tooska ah ee 'Fangda' waxay leeyihiin mudnaanta xasaasiyad sare, maaddo jilicsan, kaydka wejiga aalladda cad-cad ee daabacaadda ugu badan iyo baaritaannada qalad-la'aanta lagu kalsoon yahay.
* Taabasho sare iyo koollo joogto ah ayaa lagu kalsoon yahay oo hufan taas oo ku fiican jawiga dalabyada kala duwan.
* Calaamadaha cad iyo kuwa cufan ee dhalaalaya ayaa bixiya daabacaad heer sare ah oo daabacayaasha xawaare hooseeya ilaa dhexdhexaad ah.
* Nidaamka farshaxanka ee jadwalka taariikhda lagu caddeeyo ee midabkiisu yahay mid waara oo sahlan in diirka laga saaro. Sumadahayagu waxay ku habboon yihiin rarida, baakadaha, keydinta, helitaanka, horumarka shaqada iyo codsiyada maaraynta alaabada iwm.
* Taakuleynta dhalaalka kulul ee dhalaalaya waxay siisaa adhesion xoog leh dusha sare ee shayga.
* La jaan qaadi kara Zebra, Datamax, Santo iyo daabacayaasha kale ee calaamadaha kuleylka.
Codsiga sumadaha kuleylka tooska ah:
* Si dhakhso leh isugu rog ama hal mar adoo adeegsanaya aqoonsiga sheyga.
* Calaamadaha kuleylka tooska ah ayaa ugu horreyn loo adeegsadaa codsiyada nolosha gaaban sida calaamadaha isku-dhafan ee ay isticmaalaan FedEx ama UPS. Waxay kaliya u baahan yihiin inay socdaan dhowr maalmood illaa xirmada ay ka timaaddo isticmaalaha ugu dambeeya.
* Rasiidhada ama sumadaha rarka. Kuwani waxay qaadi karaan qiimo, barcode, cinwaan, cunto karin, iyo wixii la mid ah.
* Foornada xabagta kululeeyaha dhalaalaya ee loo yaqaan 'Patent hot', horumarinta alaabooyinka iyo bay'adaha kala duwan
* Naqshadeynta ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah: cabbirka muhiimka ah ee kala duwan, cabirka dhinta iwm
* Wuxuu fuliyaa heerarka REACH iyo ISO.
Hore: Duub warqad kulul
Xiga: Baqshadda Liiska Xidhmada PP